Inyaniso eyona nto ayikho? : UMartin Vrijland
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	18 Meyi 2019	• 6 Comments
Ngokomninimzi owaziwayo oonomathotholo uMax Igan (kwisasazo esasazantsi apha, jonga ividiyo ye-YouTube), unokufumana ubungqina kwi-theory nganye kwaye akunenjongo yokukhangela inyaniso. Ngokomzekelo, utsho ukuba kukho ubungqina behlabathi eliplaniweyo, nje ngomhlaba ongenawo umhlaba okanye umhlaba ojikelezayo okanye nokuba khona kwabaphambukeli. Enyanisweni, isiphakamiso sakhe kukuba unokwenza ubungqina ngokumalunga naluphi na umxholo. Ividiyo ilungele ukuphulaphula ngolo hlobo, kuba ikhankanya izinto ezincedo kwaye ibonisa indlela esibonakala ngathi sihlambuluke ngayo kwi-Alice 'entsha e-Wonderland'.
Oko i-Igan ehluleka ukunika ingxelo kukuba ukulawulwa kolwazi kunamandla kangangokuba kwanokuba ukufumanisa ukuba ezinye iindaba zithengiswa, umzekelo, i-flat world truth 'community', ingaba yindlela efanelekileyo yokubamba abantu olutsha ukhuseleko. Oorhulumente banakho konke ukuhlalutya kwedatha abafuna ukufumanisa apho kubonakala khona umngcipheko wokhuseleko, ukwenzela ukuba bakwazi ukumisela umnatha omtsha wokukhusela okanye umnqweno omdala wokukhusela umnqweno ungathatha ulwalathiso olutsha ukwenzela ukuba ubambe inhlanzi ephindayo. ukubamba.
Iingcamango ezininzi ezihamba nge-intanethi ziqaliswe ngamabomu ukudibanisa inkohliso yangempela yezopolitiko kunye neendaba kwiimfudu ezinjalo, ukuze zigqitywe ekugqibeleni. Uvumela ukuba ukuhamba kukhule kuze kufikelelwe ekugqibeleni ukuba iingcamango ezithile ezinxulumene nenyaniso yoluntu ziya kuba zingenangqondo. Ngokomzekelo, unokudibanisa isalathisi efana ne911 kwi 'ntshukumo yomhlaba.' Ukuba ke ubonisa ukuba loo mbono-catshulwa-mhlaba iyintlanzi, unako ukukhonza yonke into ngexesha elinye. Kuyiqhinga 'lokungcola amanzi okuhlamba' ukuze ekugqibeleni ugxothe umntwana ngaphandle kwamanzi okuhlamba. Siphinde sibone indlela yokubandakanya iinqununu zeenyaniso okanye ubuxoki, kunye nemibonakalo yangempela. Uyakhela kwii nyaniso ezinamaqabane okanye ubuxoki kwindawo ephantsi yomkhumbi wemkhunjini ukuze usebenze ibhomu ngexesha elifanelekileyo kwaye ukwazi ukukhupha abantu abadibeneyo beenqanawa ezinqanyuliweyo emva kwebhodi. Iimbulo zembonakalo zicocekile kwaye iqela elikholelwa kubo ngoku lilamanzi elincinane kangangokuthi abayi kuphinda bafune ukutshisa iminwe yabo kwakhona; uhlekisiwe ngabanye.
Into esinokuyenza into ebalulekileyo kukuba sisoloko sibhekene nokunyaniseka kwimbali kwaye asinayo ingcamango yokuba zingaphi izakhiwo zembali zakhiwe (njengoko uMax Igan ekhankanywe kwividiyo engezantsi). Inyaniso kukuba iimbono ezininzi zigqitywa ngokusisiseko kwinkqubo yenkolelo. Nangona kunjalo, yintoni uMax Igan akwenza ngokucokisekileyo (kunye nendlela eyaziwa ngayo yokuthetha) kukuqwalasela ukufunyanwa kolwazi malunga nezakhiwo zembali zexesha elidala kunye nokunyaniseka kwembali. Nangona kunjalo, ngombono wam, le mpazamo yembali yiyona kuphela ye1 inxalenye yendlela yokugcina abantu (ngokuqhelekileyo basebenzisa iziphakamiso zobuxoki). Ukuba nje silandela imeko yansuku zonke kwimidiya, ngokukhawuleza siyifumanisa ukuba kungekhona kuphela imbali esetyenziswayo, kodwa nemicimbi yangoku. Enyanisweni, usenokufika kwisigqibo sokuba lo mboniso wembali uyasishukumisela ukuba sigcine ukumba.
Ngoko ke uhlalutyo oluchanekileyo uMax Igan oza nalo, kodwa ndandisenomdla oqinileyo ukuba u-Igan usebenzisa iindlela zokuxubusha ezingxenyeni, ezidibene nemifanekiso eyaziwayo kunye neyona nto ibonisa ibhokisi elitsha le-syrup / ibhait.
Enyanisweni, sele sele sifinyelele kwisiteji apho izibhamu ezakhelwe kwiindawo eziphindwe kabini 'kwintlalo yoluntu' sele sele iqalisiwe. Abantu abaninzi baye bafumanisa ukuba iingcamango eziyilandelayo zazingalunganga kwaye ngoko zishiywe ukuphazamiseka. Abanye balelo qela baphinde baxhumane kakuhle kunye neendaba ezisemgangathweni kunye nezopolitiki ngenxa yokuba zondliwa kunye 'nemigodi yomvundla' kwaye ziqhubeka zifumanisa ukuba kukho into engalunganga ngombono. Abanye kufuneka bathatyathwe ngabantu abaphambili abaye babakhuthaza ukuba bahlalele kule miqolo 'yemivuno' iminyaka (njengoMax Igan ngokwakhe).
U-Igan ufuna ukuba sigxininise ngoku ngokusongela kwiinqununu ze-5G, kuba ngokuya kuye siya kusondela kwinkqubo apho lonke ulwazi ihlolwe (oko kuthetha ukuba asiyi kubuya kwakhona yinyani fumana imbali). Ndiyakholwa ukuba kunjalo hayi sisongelo esiphezulu sokwakhiwa kweenethiwekhi ze-5G. Ingozi ye-5G yintsebenziswano kunye ne-brain-cloud interface kunye nokukwazi ukulawula i-DNA yabantu ngokusebenzisa i-CRISPR-CAS12 indlela esuka efini (bona oku kubalulekile ngcaciso). Apho, ngokutsho kukaMax Igan, amanxibelelwano e-5G aya kusithintela ukususela ekufumaneni imbali yinyani yobukho bethu, ugxininisa ingqalelo ekuhlanganiseni ulwazi lwenyaniso. Iinqununu ze-5G ziya kuzisa 'ukuvalwa kolwazi kumaqela athile'. Ngokombono wam akukona malunga nolwazi. Akukhona malunga nolwazi olugcinwe ngembali yehlabathi lethu. Oko kuthiwa 'kugcinwe imbali yembali' kukuchanekileyo isiraphu okumele ikukhombele ebhodweni lesiraphu 'lolwazi lokwenyaniso'. Oko kuthiwa "ulwazi" ukuba i-intanethi isinika yona kuphela i-Apple esuka kwiJardin yase-Eden: isilingo somthi wolwazi (kokulungileyo nokubi).
Kuyilingo 'ulwazi lokuba i-intanethi inikezela"okufuneka kusenze sikholelwe ukuba"ulwazi olufihlekileyo'kunokufunyanwa ukuba sinakho ukufikelela kumahhala kolwazi lonke (okokuqala igan ikhuthaza). Siya kuthi, ngokwe-Igan, ngokwenene sinokufikelela kuwo zonke bakwazi ukufumana ulwazi (nge-intanethi). Enyanisweni, u-Igan ubonakala ufuna ukusikhuthaza ukuba sifinyelele kwi-intanethi i-Apple yonke yolwazi endaweni yoko ukuluma kancane kwi-Apple (bona i-logo ye-Apple) esiye sakwazi ukunambitha kwangoku. Enyanisweni, kufuneka sibe nokufikelela kuwo wonke umthi wolwazi.
Ukuba wenza njalo yengozi yangempela I-5G kwaye ibeka nje ukuba i-radiation iyingozi yaye ithi le ntanethi izakusivala ngokucacileyo "ulwazi lwenyaniso", awuyikhankanyi into yokuba kwi-intanethi ngokupheleleyo Ngokuchasene noko, uye wagxeka ukuba afinyelele imeko apho sithe sondela khona. Injongo yokuba sidibene naloo mthi wolwazi. Simele sixhumeke kumthi wolwazi, njengoko udibanisa ukusika kumthi. Ingqondo yomntu kunye ne-DNA yabantu kufuneka ingene ilifu fi kelela.
Ukukhangela "imbali yinyani" kufuneka ukuba asikhokele kwicala Umthi we-Apple ukuze sikwazi ukuxhunywa ngokungahambi kakuhle. Sekunjalo, ividiyo ye-Max Igan ilungele ukubukela. Khumbula, nangona kunjalo, ukuba ukukhangela ulwazi oluyiyo (olufihlakeleyo) ulwazi luyi-syrup emele udibanise kumthi wolwazi (kufuneka ulingeke ukuba unamathele emthini). Ngoko u-Igan udlala indima yenyoka esuka kwibali le 'Garden yase-Eden apha.'
Ndiyibhale ngokucacileyo igama le-apple elingentla apha njenge-Apple, ngenxa yoko unokubona ukuba kutheni leli gama linyulwa kwi-iPhone yakho ye-Apple
Ndiya kuthanda ukukuxelela ukuba kungenzeka ukuba kusekho ukukhohlisa okungaqhelekanga kwintlalo yabantu. Ungathi kwakhona le yinto enye inokhuseleko lomnatha. Nangona kunjalo, ukuba sibheka ukunyaniseka kwembali kunye nendlela abantu abaxakeke ngayo kubonakala bafihla imbali ye nyaniso, saphinda sigxile kwingingqi esezantsi. Ukuba sifumanisa ukuba iziganeko zangoku ziqhutyelwe (kwaye ngoko-ke akukho mlando uqhutyelwe), sinokugqiba ukuba ukuphathwa kakubi kakhulu kunokuba sasiyicinge. Yingakho ndifuna ukukunika ingqalelo ukuba yonke "inyaniso" iyindlela yokuqonda. Ukuba i-quantum physics (ngokusebenzisa i-double slits experiment) ibonisa ukuba siphila kwisiganeko, unokuthi ukulinganisa zombini imbali kunye neziganeko zangoku zinokusetyenziswa ngexesha langempela. Ukuba uqala ukusuka kwi-simulation 'multiplayer', kufuneka uqinisekise ukuba unako ukuqinisekisa bonke abadlali ngexesha elifanayo ngeendlela ezifanayo zokuphatha.
Ingcamango yokuba siphila kwindawo yokufanisa, apho 'umphefumlo' ngumlindi / umdlali (kumdlalo wabadlali abaninzi), unokubhekwa njengokuphazamiseka ngokupheleleyo okanye njengenye enye impazamo (intsha 'yomjelo'). Ndingathanda ukubonisa ukuba le nto inokuba yimpendulo kuyo yonke imibuzo yakho kwaye inokumemezela ukuphela kwakho konke ukukhangela. Kwimeko nayiphi na into, kubalulekile ukuba sifumanise ukuba asiyikubandakanyeka ngokusisigxina 'kumthi wolwazi', ngoko kubalulekile ukuba asiyi kuhamba rhoqo kwindawo entsha 'yomvundla'.
i uvavanyo oluphindwe kabini ibonisa ukuba umbonisi uyadingeka ngaphambi kokuba umhlaba uphawule (ngokuba 'iliso' lomlindi). Kubalulekile ukuqonda le migaqo kakuhle. Oku kungenxa yokuba umbukeli ungaphandle kweli hlabathi elibonakalayo (le ngcamango ebonakalayo). Singachaza loo mboni njengomphefumlo "nokuba" nantoni na efuna ukuyibiza. Yiloo nto abaninzi bacinga ukuba iyenzeka kwakhona kwaye amakholwa ezinqulo ezahlukeneyo akholelwa ukuba uya ezulwini okanye esihogweni. Ngaloo ndlela, umbonisi wangaphandle, ngoko kunjalo, umntu ohleli elaleni lokulala kunye nomlawuli osesandleni kunye nehlabathi elibonakalayo yilokho ubona kwiskrini sakho xa udlala umdlalo wakho we Playstation.
Ukuba siqala kwimodeli yokulinganisa, kukho zombini umakhi wesimangalo ngaphezu abadlali. Umdlali nguye owenza izigqibo; umntu onomlawuli esandleni sakhe obona ukubonwa kwesikrini kunye nokulawula ipiliti kwisikrini. Ikhowudi yomthombo yale nkqubo inquma amathuba. Ezi zikhundla zibekiwe kwimithetho ehambelana nokulinganisa (ukucinga ukuba siphila kwisimo esifanayo). Ngokomzekelo, kufuneka sikwazi ukujongana nemithetho yemvelo njengobunzima okanye isivinini sokukhanya kwaye sikhula, singagula okanye sife. Leyo imigaqo yomdlalo.
Xa siqala ukubona oko, siyafumanisa ukuba asinguJantje, Pietje, Marieke okanye nayiphi na enye into, kodwa ukuba umzimba wethu nobuchopho buyi-puppet kumdlalo (i-mutliplayer simulation). Ngoobani ngokwenene niyihlolisayo (ukuthatha inxaxheba / ukudlala) umphefumlo kwimeko yokwenyanya into apho yonke into ingaphathwa ngayo.
Into endivumelana nayo noMax Igan kukuba kufuneka sithathe izinto ezandleni zethu. Ngoko kubalulekile ukuqala ukuqonda intsingiselo yethu yokwenene. Ngoko ke ndincoma eli nqaku ufunde kakuhle. Kuyo, ndichazela imodeli yokulinganisa ngokucacileyo kwaye ndichaze nokuba kutheni umyalelo wenkululeko yokuzikhethela kufuneka usebenzise njalo. Ukuba uthabatha ixesha lokwenza oku, unokufumanisa ukuba izigqibo zakho zigqibeleleyo kwisiphumo. Oku kuthetha ukuba kufuneka uguqule isimo sengqondo (mhlawumbi) esingahambiyo kwisimo sengqondo esisebenzayo. Ewe, akudingeki, kodwa kuya kuba "bulumko". Ukongeza, ukuba ufumanisa ukuba kukho impembelelo ebalulekileyo ukhetho olwenzayo ebomini bakho, uya kuba nomnqweno kunye nomnqweno wokwenza okunjalo. Hlalani nihlala nikhumbula engubani ngokwenene. Awuyi-avatar yomntu ngoku ufunda le nqaku kwisihlalo. Yiyo kuphela ipopethi emdlalweni owe (umphefumlo wakho) owaziwayo.
Cinga ngalo uze ufumane! Thatha ubomi bakho kwaye ungalindele ukuba 'uphuma phezulu.'
Yintoni esiya kuyenza xa iidrobho zithatha umsebenzi wethu?
Iinkqubo zokunakekelwa kwabantwana ezisetyenziselwa ukunyanzelisa ukunyanzelwa kwelokugonywa, u-Berend Botje ukunakekelwa kwezilwanyana ukwenqaba abantwana
tags: 5G, iqhinga, iingcamango zobuqhetseba, eziziimbalasane, Imbali, ukugqithiswa kwembali, Igan, max, Nyaniso, ukukhangela
18 Meyi 2019 kwi-18: 32
Akunakuqala ngcamango, kodwa ngeenkcukacha.
18 Meyi 2019 kwi-21: 09
Iifatyana ezithembekileyo ziza ngokwenene zivela kwiingcamango ezisemgangathweni. Akunakuze akhulume ngee-athomu, iiponononi kunye neetronti engcinga ukuba zijikeleze. Ukuba bebukrekrele ke yonke into yayibheke njenge-minecraft. Umhlaba kunye neeseli zethu zomzimba zihamba ngokukhawuleza kangangokuthi asikwazi ukuyiqonda kwindawo yethu yangoku. Ukuba unobhakethi lwamanzi lulele, amanzi ahlala kwibhakethi.
Ukongeza, iiseli ziyakuthabatha zonke iifom, zitshintshe kuphela ikhowudi. Kanye njengendlela yeTV kunye ne-intanethi yekhompyutha, sinokuzigcina zonke iifom kwiskrini.
Ingcamango yakho yokuba siye sabamba i-apula ngaphambi kokuhambelana kakuhle nale nto. Ndiqinisekile ukuba siye sabona oku ngaphambili. Kwakuyi-Atom noEva, kwaqala ngejubane lokukhanya kuphungula ukwenzela ukuba ngoku (okwethutyana) siqonde le hlabathi. Akusiyo into yokuba umlindo ubizwa ngokuba ngumlindo, ixesha = ubukele / ugcine.
Awunayo ukufakazela oku, kholelwa nje.
18 Meyi 2019 kwi-21: 24
Ndiyavuya kukuba uyaqhubeka!
Kukho bambalwa abakufumanisa izinto ezibalulekileyo. Xa abantu beqala ukuqonda oko ubhalayo, akusengqiqweni ukulwa nenkolo yakho okanye nantoni na. Emva koko ubona ukuba ulwazi oluthile lugcinwe ngamabomu ukuze lusigcine ebhokisini elingenalwazi.
Asilwe nabanye abantu kodwa ngokumelene nabagcini bemifanekiso abangabonakaliyo.
Zihlala zihle kwaye zisuka kwi-original yethu kunye nento oyithethayo i-Apple ukuze siphendule i-adroid kwaye siphume ngakumbi kwi-original yethu. Ukuba ujika uphila ufumana ububi.
19 Meyi 2019 kwi-09: 27
Ngokuvisisanayo, inceba yokuba inkqubo yemfundo kwaye ngoko
imfundo phantse bonke abantu emhlabeni ihamba kunye nemithetho ebekiwe. entle / embi yinto yokuqala ufunda.
Asikwazi ukuthetha ngokufanelekileyo, ngelanga. Amandla alawulwa kwiprogram yezemfundo kwaye abantu balinde isithuba sabo somvuzo kwiSebe lezeMfundo kunye neNzululwazi kwaye baxelele inzala ngokucacileyo ukuba yintoni na igunya egunyazisiweyo kubo, yintoni yokwenza?
Kodwa ngokuthakazelisayo silwa "kungekhona" ngokumelene nabanye abantu kodwa ngokumelene nabalindi abangabonakaliyo,
Ngaba abo balingisa abalondolozi kakuhle abantu okanye abadeleyo okanye ewe niyilwa xa bengabantu.
19 Meyi 2019 kwi-20: 53
Ndicinga ukuba uLucifer kunye nabancedisi bakhe bangumoya, ababiza ngokuba ngabafokazi baqondwa kakuhle. Amathuba kukuba siyakwazi ukusebenzela indlela yethu yokunyuka kweli hlabathi eliya kuthi sishiye ububi. U-Lucifer unokusebenza kuphela ngezandla kunye nobuchule. Ukuba uzincitshisa kwi-fan fan yakho uvula ukuxhatshazwa. Asinanto yokwesaba xa siqaphela ukuba silapha okwethutyana kwaye kufuneka singene kwii-frequencies eziphezulu. Akukho nkwantyi!
Njengoko ngokuqinisekileyo uye wambona, ingoma ehloniphekileyo kaLucifer iphumelele.
Ukuthanda kum umdlalo wokulahla. Akayikucula ngokwakhe kodwa uvumela iDuncan ukwenza oku, mhlawumbi uDuncan akanakucinga ukuba uyaphakamisa.
Uyazivuma ngokwakhe, ukuba uyinkosi ukuba uphumelele kule Netherlands ayithethi ukuba uya kukhutshwa kulo mhlaba.
19 Meyi 2019 kwi-23: 38
Uhlobo lomnye igama labafokazi. Singaphandle kwaye uLififer usemhlabeni.
Bajika yonke into!
« Ingaba umsebenzi weendaba kunye nabalobi beempendulo kwaye bathengisa imisebenzi ye-PsyOp njengoko benzayo ngemiboniso yeTV?
UDuncan akakwazi ukucula kunye ne-Eurovision Song Contest ihambe (i-LGBTI propaganda) »
Iindwendwe ezipheleleyo: 13.796.391
SalmonInClick op Sele luqalile uhlaselo? I-Psycholance yayisele inikezwe ukukhanya okuluhlaza kwi-2018 esekwe kwimeko ye-Els Borst / Bart van U.
Ikhamera 2 op URobert Jensen "UDonald Trump akakholelwa kwi-New World Order" uqinisekisa: IJensen.nl ilawulwa ngokuchaseneyo
SandinG op URobert Jensen "UDonald Trump akakholelwa kwi-New World Order" uqinisekisa: IJensen.nl ilawulwa ngokuchaseneyo
Cubungula op URobert Jensen "UDonald Trump akakholelwa kwi-New World Order" uqinisekisa: IJensen.nl ilawulwa ngokuchaseneyo